निशान बुढाथाेकी 2021-09-18 20:16:00
महिला र पुरूष भएकै नाताबाट समुदायले निर्धारण गरेअनुसार पुरूषले गर्नुपर्ने काम तथा महिलाले गर्नुपर्ने कामहरूको वर्र्गीकरणलाई लै‌गिक विभेद भनिन्छ। हाम्रो समाजमा व्याप्त अशिक्षा, रूढीवादी एवं परम्परागत सामाजिक मान्यता र धारणा, लैंगिक भेदभावपूर्ण कानूनी व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा महिला सहभागीताको कमी, शक्ति संरचनामा पुरूषहरूको बाहुल्यता र महिलामाथि महिलाले समेत शोषण गर्ने प्रवृत्ति जस्ता कारणले गर्दा लैंगिक विभेद एक जटिल समस्याको रूपमा झाङ्गिदै गएको पाइएको छ।
त्यसो त लैंगिक विभेद न्यूनीकरणको प्रयास नेपालले गरेको पनि छ। हालै सार्वजनिक गरिएको लैंगिक असमनता सूचक अनुसार नेपाल ११२आंै स्थानमा उक्लिन सफल भएको तथ्यले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि, पित्तृसत्तात्मक समाज जहाँ गर्भधारणदेखि नै छोरीमाथि विभेदकारी सोचको विजारोपण सुरु हुन्छ।
अनि धार्मिक एवं सामाजिक परम्पराअनुसार छोरालाई छोरीको भन्दा बढी महत्व दिइन्छ। नारीलाई बस्तुको रूपमा लिइन्छ भने यस्तो अवस्थामा लैंगिक समानता कायम गराउन राज्यले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छ। समाज परिवर्तन संग–संगै महिलामाथिको विभेद र थिचोमिचो विरूद्ध विभिन्न संघर्ष हुँदै आएका छन्।
यस्ता संघर्षले महिलामाथि हुने लैंगिक विभेद घटाउन सहयोग पनि मिलेको छ। यसो भएतापनि पर्याप्त भने छैन्। समयलाई कोल्टे पारेर हेर्दा, हाम्रो समाज त्यही हो! जहाँ महिलालाई वस्तुको रुपमा लिइन्थ्यो। तर, आज समय बदलिएको छ। बस्तु सरह व्यवहारले पिल्सिएकी त्यही महिलाले आज चमत्कारपूर्ण फड्को मारेका छन्।
जसको प्रमाण हो नीति निर्माणको तहदेखि घर व्यवहारसम्मको क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका हो। यो भूमिकालाई महिलाले अझ सशक्त बनाउँदै लगेका पनि छन्। अझै पनि सबै वर्गका महिला सशक्त हुन भने बाँकी नै छन्। घरको चौघेराभित्र जीवनलाई सिमित पर्नु पर्ने बाध्यतालाई आजभोलि महिलाले चुनौति दिदै समाजमा आफ्नो क्षमता मार्फत पहिचान बनाउन सफल भएका छन्।
महिला, समाजका शक्ति हुन्, महत्वपूर्ण अंग पनि। हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलालाई अगाडि आउन दिइदैन। त्यसैले उनीहरु सक्षम हुँदाहुदै पनि पछाडि पर्न बाध्य छन्। चेतना र शिक्षा, महिलाको विकासका लागि प्रमुख बाधा हुन्।
त्यसैले अहिले राज्य, सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले महिला सशक्तिकरणका कामहरु गरिरहेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक नतिजाहरु पनि ल्याएका छन्। महिलाले समाजमा अवसर पाए मुलुक परिवर्तन गर्न सक्दछन्।
यस्तो अवसरका लागि आजभोलि महिला स्वयम जागरुक हुँदै पनि गएका छन्। जसवाट हाम्रो घर समाजमा विकसित भइरहेको लैंगिक विभेदलाई जरैदेखि न्यूनीकरण गर्न टेवा मिल्न गएको छ।
Published Date: 2021-09-18 20:16:00
मागेर खानेहरुलाई दशैं कहिले आउला ? शनिबार, असोज २, २०७८, २०:१६:००
मन, वचन र कर्ममा शुद्धता, कार्यदक्षता अनि प्रतिवद्धताका प्रतिक वडा अध्यक्ष शुद्ध डंगोल शनिबार, असोज २, २०७८, २०:१६:००
न्यायमा महिलाको पहुँच शनिबार, असोज २, २०७८, २०:१६:००
स्थानिय निकाय घर-आँगनको सरकार शनिबार, असोज २, २०७८, २०:१६:००
दुई देवीको पूजा गर्नुपर्ने स्पष्ट नहुँदा भक्तजन अन्यौलमा
नौ दुर्गामध्येकी पाँचौँ स्कन्दमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना
शेयर कारोबारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट
उपत्यका छाड्नेको सङ्ख्यामा बृद्धि
बडादशैं : कुष्माण्डा देवीको पूजा आराधना
मनसुन बाहिरिन शुरु
मागेर खानेहरुलाई दशैं कहिले आउला ?
लगानी बोर्डको बैठकले करिब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत